Ungayichukumisa njani ipeyinti yemoto yakho
Ukuchukumisa ukuqala okuncinci emotweni yakho ngebhotile encinci yepeyinti yokuthinta kulula. Ngaphambi kokuba uqale umsebenzi, gubungela ummandla ojikeleze kakuhle kwaye usebenzise, ​​ukubetha imivimbo ukufaka ipeyinti. (Landela umkhombandlela kwitoti ngononophelo.)
Ubuchule obusetyenziselwa ukupeyinta umzimba wesithuthi bunokwahluka ngokobungakanani bendawo osebenza kuyo kunye nopeyinti wokuqala kunye nokugqitywa. Ngaphandle kokuba unesandla esinamava nesizinzileyo (kwaye ipeyinti yoqobo yemoto ayizange icime okanye itshintshe umbala ukusukela ekubeni yayintsha), phantse akunakwenzeka ukuba uyifihle into yokuba upeyinte nantoni na enkulu kunendawo encinci.
Iindawo ezinkulu zifuna ukupeyinta ukutshiza, ekufuneka kwenziwe kwindawo enomoya kakuhle engenalo uthuli nobumdaka. Ke ukuba indawo oyifunayo kufuneka ipeyintiwe inkulu, iya kukubiza imali encinci ngexesha, imali, kunye nomzamo wokuba umsebenzi wenziwe yingcali enokulingana nepeyinti kwaye iwenze ngokufanelekileyo umsebenzi.
Ukuba ufuna umsebenzi onexabiso eliphantsi kodwa onesidima oza kuhlala unyaka okanye njalo, khangela ukuba abathengisi beemoto basekuhlaleni bazithatha phi iimoto abazisebenzisileyo abazifumanayo njengorhwebo ukuze babacaphukise ngaphambi kokuba bazithengise. Ukugcina imali, ungasusa nawuphi na umhlwa, uzalise indawo, upeyinte ezo ndawo zincinci ngokwakho, emva koko uwenze wonke umsebenzi ngokufanelekileyo.
Ziqhelise kwisiqwenga sesinyithi esilahliweyo ngaphambi kokuba uyenze imoto, kwaye ungalindeli ukuba iziphumo zikhangeleke ngathi ziyothusa. Landela la manyathelo:
Thenga umbala opeyintiweyo.
Jonga kwi-firewall yesithuthi sakho-kuya kufuneka ubone ipleyiti encinci enenombolo yomzimba kunye nenombolo yekhowudi kuyo.
Iibhotile zokuchukumisa ipeyinti zihlala ziza nebrashi okanye isixhobo sayo. Ufuna kwakhona ibhotile encinci ye-primer ngaphandle kokuba ipeyinti ichaza ukuba ayifuneki.
Qiniseka ukuba indawo leyo ayinarusi.
Ukuba umonakalo kukukrola okunzulu kuphela okanye indawo encinci, unokufuna i-dab ye-rust arrestor ukunqanda umhlwa ekuqhubekeni ukwenza ifom phantsi kwepeyinti entsha.
Isanti indawo ngononophelo.
Sebenzisa isiqwenga esincinci se- # 220 sandpaper ukukrola umphezulu ukuze i-primer inamathele ngokufanelekileyo.
Hlamba loo ndawo kakuhle.
Susa nakuphi na ukubamba umhlwa, uthuli, ukungcola, intsalela yokugcwalisa kunye ne-wax; emva koko indawo mayome kwaphela ngaphambi kokuba ufake isicelo. I-Primer isetyenziselwa ukutywina umphezulu wesinyithi ngokuchasene nomhlwa kunye nokubonelela ngomhlaba wokupeyinta. I-Primer nayo igcwalisa imingxunya encinci kunye nokungafezeki kumphezulu.
Ukuba ujongene nokukrwela umphezulu okanye i-chip engekho ezantsi kwisinyithi esingenanto, kunokwenzeka ukuba ubaleke ngokufaka ipeyinti. Kodwa ungaze usebenzise ipeyinti kwinyithi engenanto okanye iplastiki. Ukuba indawo engenanto ibonakalisiwe, okanye ukuba indawo inkulu kuneqhezu le-intshi, kuqala indawo leyo kuqala.
Sebenzisa ibrashi encinci okanye umlinganiso wokufaka umlinganiso.
Akufanele ufune ngaphezu kwetonsi yokugubungela indawo eyonakalisiweyo. Gwema ukufumana i-primer kwipeyinti yoqobo. Ukuba uyakwenza oko, sula ngokukhawuleza. Vumela i-primer yome kakuhle ngaphambi kokudlulela kwinqanaba elilandelayo.
Hlanganisa ipeyinti kwibhotile yokubamba.
Ngaphandle kokuba imoto yakho intsha kakhulu, umbala ngekhe uhambelane ncam (sesinye isizathu sokugcina indawo incinci ngokusemandleni). Ipeyinti kwiimodeli ezintsha ayipheli ngokukhawuleza okanye kakubi njengakwipeyinti ezindala.
Faka ipeyinti, ugqume umphezulu wendawo kwaye usebenze ngaphakathi ngaphakathi.
Ukuba upeyinta isikrweqe okanye indawo encinci, unganqumla ibrashi okanye usebenzise umcinga wokulinganisa okanye i-toothpick endaweni yoko. Ipeyinti akufuneki ibengaphezulu kunomphezulu ojikelezileyo okanye iya kubonisa, ibaleke, ibhabhu, okanye icime.
Lindela iintsuku ezininzi ukuze yonke into yome ngokupheleleyo.
I-Wax kwaye upolishe yonke imoto ukudibanisa kwindawo epeyintiweyo kwaye uzise yonke into kubengezela obuphezulu.
ndingathatha i-viagra kabini ngemini
zide kangakanani iziphumo ebezingalindelekanga ze-flomax
yintoni i-diclofenac sodium gel
spiriva simahla unyaka